Ugu yaraan 25 qof oo ku dhintay daadadka roobab xoogan oo ka ... | Universal Somali TV
Ugu yaraan 25 qof oo ku dhintay daadadka roobab xoogan oo ka da'aya koonfurta Thailand
January 10 2017 20:02:07
Fatahaadaha ayaa dilay ugu yaraan 25 qof oo ku nool koonfurta Thailand tan iyo bilowgii sanadka, iyadoo uu saameeyay in ka badan hal milyan oo qof.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa sheegtay in daadadku ay ku dhufteen 12 gobollada tan iyo January 1, kaasoo xagga koonfureed ka jaray dalka intiisa kale ka dib markii jidka weyn ee isku xidha gobolka iyo qaybaha kale ay xireen daadadka.
Afhayeenka waaxda jidadka ayaa sheegay in baabuurta la joojiyey inay maraan waddada weyn ka dib markii laba buundooyinka isku xira ay burbureen. daadadka biyaha oo sara u kacaya ayaa sidoo kale qasbay in la joojiyo safarada tareenka ee dhanka koonfureed.
Tirada dhimashada ayaa kor usii kacay maalmihii la soo dhaafay iyadoo ay daadadku gaareen heer saqafka-sare meelaha qaarkood.
Gabadh yar oo shan sano jir ah ayaa ka mid ah dhibanayaasha . Waxay ku dhimatay gobolka Prachuab galabtii isniinta ka dib markii daad uu qaaday gaarigii ay ku safrayeen.
"Qoyskeeda ayaa koray saqafka sare ee gaari Van ah oo ay saarnaayeen si ay uga fogaadaan biyaha laakiin waxay ku dhacday oo qaaday daadka iyada iyo hooyadeed," ayuu yiri shaqaalaha gargaarka Rawiroj Thammee.
Kan-xigaGuddiga fulinta JCPOA oo ka wada hadl...
Kan-horeMadaxweynihii hore ee dalka Jarmalka ...
33,284,564 unique visits